पराजितलाई उम्मेदवार नबनाउन कांग्रेसमा दबाब, पौडेल र निधि इच्छुक !::NepalBhaskar
पराजितलाई उम्मेदवार नबनाउन कांग्रेसमा दबाब, पौडेल र निधि इच्छुक !
काठमाडौँ, १ माघ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका नेतालाई राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार नबनाउन कांग्रेसभित्र दबाब बढेको छ । दुवै तहका निर्वाचनमा पराजित नाम चलेका धेरै नेताले फेरि पनि उम्मेदवारी दाबी गर्न सक्ने देखिएपछि उनीहरूलाई उम्मेदवार नबनाउन सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढाइएको छ ।
कृष्णप्रसाद सिटौला, डा। शेखर कोइराला, अर्जुनरसिंह केसीलगायत नेताले पराजितलाई उम्मेदवार बनाउन नहुने बताउँदै आएका छन् । तर, नेता रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधिसहितका नेताहरू भने यस विषयमा मौन छन् । उनीहरू सबै पराजित नेता हुन् ।
थोरै सदस्य मात्रै जित्ने भएकाले पनि यो निर्वाचनबारे उत्साह नदेखिएको हुन सक्ने कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । ‘एकल संक्रमणीय हुँदा पनि कांग्रेसले हरेकबाट बढीमा दुईवटा जित्ने हो । परिणाम पनि उल्लेखनीय नआउने भएकाले उत्साह नदेखिएको हुन सक्छ,’ ती नेताले भने, ‘फेरि पनि खल्तीबाटै नाम निकाल्ने तयारी हो कि भन्ने देखिन्छ । आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।